Ukusasazwa ngaphandle kwamacingo kwiYunivesithi yaseBeijing e China
IProfayili yoMthengi iYunivesithi yase-Beijing yamaHlathi (i-BFU, okanye i-BJFU) yiyunivesithi e-Haidian District, eBeijing egxile kumahlathi. Yiyunivesithi enobuhlobo ekwabelaneni ngolwazi malunga nesayensi, ubunjineli, imithetho, ubugcisa kunye neelwimi kwihlabathi. Imfuneko -Ukusebenza okuphezulu kwe-WiFi ...
INdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ye-U20 yowama-2019 ePoland
IProfayili yoMthengi Indebe yeHlabathi yama-20 yama-U-20 yeNdebe yeHlabathi iza kubanjelwa kwizixeko ezi-6 ePoland ukusukela nge-23 kaMeyi ukuya kwi-15 kaJuni ngo-2019. Inethiwekhi ye-Intanethi iSc ...
I-DCN inceda uRostelecom ukwakha ubume bendawo yasemaphandleni e-Russia
Iprofayile yomThengi iRostelecom ngowona msebenzi mkhulu wokunxibelelana nomnxeba welizwe laseRussia ngowona mnatha mkhulu womqolo wasekhaya (malunga ne-500,000 km) eRashiya kwaye unikezela ukufikelela "kumayile yokugqibela" kumakhaya angama-35 ezigidi kwilizwe liphela. Isidingo -Ukubonelela ngokufikelela kwinethiwekhi kubasebenzisi abancinci kwimimandla yasemaphandleni ...
Isisombululo senethiwekhi yokufikelela kwi-DCN ISP
Amagqabantshintshi ngemvelaphi Phantsi kokhuphiswano olunamandla lwentengiso, ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi (ISPs) kwimakethi yeenkonzo iye yancipha kwaye yancinci (umzekelo, ibhendi ebanzi, i-MPLS VPN kunye neSMS). Okwangoku, ubukrelekrele bobugcisa (i-AI), iNyani eyiyo (iVR), uhlalutyo olukhulu lwedatha, kunye nekhompyuter yelifu: ...
Isisombululo senethiwekhi ye-DCN IP
Ulwazi ngemvelaphi Izisombululo zokujonga i-IP zisetyenziswa kakhulu kuwo onke amashishini, anje ngala: · Imfundo: ukubekwa kweliso kumabala okudlala esikolo, iipaseji, iiholo kunye namagumbi okufundela, kunye nezinye izakhiwo; Ezothutho: ukubeka esweni okude isikhululo sikaloliwe, umkhondo kaloliwe, uhola wendlela kunye nesikhululo seenqwelomoya ...
Isisombululo seZiko ledatha leDCN
Ulwazi lwangemvelaphi Ukusetyenziswa okubanzi kwekhompyuter yelifu, idatha enkulu kunye ne-intanethi ephathekayo kukhawulezisa ukumiliselwa kweenkonzo ezintsha kunye nokudala ukugcwala kwiziko ledatha. Oku kufuna impendulo ekhawulezayo kwinethiwekhi yeziko ledatha. Isisombululo senethiwekhi yedatha yeziko ledatha ibonelela abathengi ngokwakha ...